कर्मचारी समायोजन – माया लाग्छ भन्दैमा भूपू प्रेमिकालाई कसैले अंगालो हाल्दैनः मन्त्री पण्डित « News24 : Premium News Channel
कर्मचारी समायोजन – माया लाग्छ भन्दैमा भूपू प्रेमिकालाई कसैले अंगालो हाल्दैनः मन्त्री पण्डित
प्रष्ट बोल्छन् , काम पनि त्यसरी नै प्रष्ट भएर गर्छन । यस अघि पनि विदेशमा ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारवाही गरेर जुन ख्याति कमाए त्यसैको प्रतिफल हो उनले सिंहदरबारका लागि दोहोर्याएको यात्रा भन्दा फरक पर्दैन पनि । उनी अर्थात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित । दोहोर्याएर उही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री पण्डितको सामु यसपटक कर्मचारी समायोजनको चर्को भारी शीरमा थियो । तर उनले यो भारी पनि विसाएका छन् । उनकै भाषामा मानव व्यवस्थापनलाई संसारकै सबभन्दा गाह्रो काम मानिन्छ र यो काम सकेर संसारलाई चकित पारियो । तर सबैको चित्त बुझाउन नसकिने यथार्थलाई सहजै स्वीकार्ने मन्त्री पण्डित भन्छन ‘ माया लाग्छ भन्दैमा भूतपूर्व प्रेमीकालाई कसैले अंगाल्दै न नि । ’ न्यूज २४ नेपाल डट टिभीका लागि अनलाइन जर्नलिष्ट कृष्णकुमारी चौलागाईले गरेको कुराकानी विस्तृतमा ।
कर्मचारी समायोजनले संसारलाई चकित पायौँ भनिरहँदा नेपाल भित्रै समायोजन वैज्ञानिक भएन भनेर चर्को आलोचना भईरहेको छ नि ?
सामुहिकरुपमा हेर्ने कि व्यक्तिगत भन्ने कुरा हुन्छ । सामुहिक रुपमा न्यायोचित देखिदा व्यक्तिगतरुपमा हेर्दा कतिपय व्यक्तिका आग्रह र पर्वाग्रह पूरा नहुन सक्छ । देशले निर्णय गर्दा देशको हित हेर्ने हो । देशको हितमा काम गर्दा कुनै व्यक्ति या समुहले आफुलाई बढी सेवा सुविधा चाहिन्छ भन्ने हुन्छ । बढी सुविधा खोज्नेले विशिष्ट किसिमको काम पनि त गर्नु पर्छ । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा मैले पहिलो पटक हाइटेकको प्रयोग गरेर काम गरे । विश्व हाइटेकको प्रविधिले चलेको अवस्थामा मैले पनि सोही विधिलाई अपनाएर काम गरेको हो ।
कर्मचारीहरुलाई २१ दिनको समय दिएर आफ्नो इच्छा राख्नुहोस् भनिएको र जस्मा प्रश्नावली तथ्यांक अनुसार राख्न पनि निर्देशन दिइएको थियो । कर्मचारी मात्र भएर पनि भएन कार्य क्षमता दक्षता पनि हेर्नुपर्यो, कर्मचारी त हो, माया लाग्छ तर माया लाग्छ भन्दैमा भूपू प्रेमिकालाई त कसैले अंगाल्दैन । एउटा परीक्षार्थीले नतिजा आउनेबेला म त सही थिए तर यो कपी जाच्ने मास्टर चाहिँ गलत होे भनेको जस्तै हो, समायोजन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै भएको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्ने अवसर पनि पाएका छन्, कसैले तोक लगाएको भरमा, भन्दिएको भरमा भन्नेहरुको प्रक्रिया ध्वस्त पारेको छुँ । गफ गरेर तलब खानेहरुलाई भने समायोजनले अप्ठ्यारोमा पारेको पक्का हो ।
कर्मचारीलाई रोजेको स्थानमा पठाइयो कि मन्त्रालयको तोकेको स्थानमा कर्मचारीलाई जान बाध्य पारियो ?
सकेसम्म रोजेको स्थानमा पठाएको हो । त्यो सम्भव नभएको खण्डमा कानुन बमोजिम जागिरको जेष्ठता, उमेरको जेष्ठता,प्रमोशनको जेष्ठता र पछिल्लो समय अपडेट गरेको ठेगानाको आधारमा एवं कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम श्रीमान् श्रीमती एकै ठाँउमा पार्ने कोशिस पनि गरिएको हो । मिल्दै नमिल्ने ठाँउमा पद सृजना गरेर दुवै जनालाई एकै ठाँउमा पार्ने कुरा त भएन ।
कर्मचारी समायोजन सकिँदा, अझैपनि स्थानीय स्तरमा कर्मचारी अभाव उस्तै नै छ, यस्लाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?
समायोजन सकिएपछि धमाधम ७ वटा टोलीहरु तयार छ, अब लोकसेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदको लिष्ट पठाएर पदपूर्ति गरिन्छ, त्यो पनि फास्ट ट्रयाक मार्फत त्यो भनिपनि सकेका छौ ।
करार तथा अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
जागिर रहेसम्म रहन्छन्, स्थायी कर्मचारी आएपछि काम सकिएपछि उनीहरुको जागिर स्वत सकिन्छ । अस्थायी तथा करारमा रहेको कर्मचारीको लागि भनेर स्थायी भर्ना प्रक्रिया नै राक्ेने कुरा भएन । करारमा रहेका कर्मचारी पनि स्थायी जागिरको लागि लड्न जानु पर्यो, जागिर पनि चाहिने अनि भिड्न पनि सक्दिन भनेर त मिल्दै मिल्दैन ।
तपाई विश्वलाई चकित पार्ने काम गरे भन्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम भएन भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
अप्ठ्यारो काम सम्पन्न हुँदा, संसारको कुनै स्थानमा केन्द्रीय प्रणलीबाट, संघीय प्रणलीमा कर्मचारी व्यवस्थापन एकै वर्षभित्र, त्यो पनि संगठन संरचना तय गरेर त्यसलाई विभाजन गर्दै त्यसलाई काम गर्ने काम कही पनि भएको छैन । जिम्मेवारी कस्को के हो त्यहीबाट टेस्ट हुन्छ । म च्यालेन्ज गरेर भन्छु सबैभन्दा गाहे काम भनेको मानव व्यवस्थापन हो । जिम्मेवारी नपाउन्जेल कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कस्तो हुन्छ, एउटा परिवारमा रहेको ५ जना परिवारको व्यवस्थापन त असहज हुन्छ भने मानव व्यवस्थापन झन् जटिल कुरा भएको छ ।
कतिपय अप्राकृतिक कुरा खोज्नेहरुले यो काम भएन त्यो पनि भएन भन्ने आरोप लगाएका छन् । कुनै काम गर्नको लागि समय पनि लाग्छ, नकारात्मक विशेषण गर्नेहरु प्रति मलाई केही भन्नु छैन् । सकारात्मक विश्लेषण गर्नेहरुलाई थाहा छ काम त भाको छ फास्ट ट्रयाकमा नै कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा नगरेर नै भन्ने जमात पनि छन् । त्यसैले यो पूर्वाग्रह गर्नेहरुको भनाई हो भन्न चाहन्छु ।
समायोजनको क्रममा कस्ता खालका समस्या झेल्नुपर्यो ?
त्यो अवधिमा कस्ता समस्या चाहिँ आएनन् । काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने जमातले आन्दोलन गरेर माइतीघर मण्डला तताए । काम नगर्ने र तलब मात्र लिने भन्ने जमातले समस्या सृजना गर्ने नै भए । मैले पहिला पनि स्पष्ट संग भनेको थिए, काम गर्न गाहे भएको छ भने सजिलो उपाय गर्दा हुन्छ भनेर तर काम पनि नगर्ने र समस्या पनि सृर्जना गर्ने जमातलाई समायोजनले काम गर्न बाध्य बनाउने वित्तिकै उल्झन निकाल्न थालेका थिए । तर म त्यसमा अडिग भएकोले त्यस्तो समस्यालाई अटेर नै गरे अन्तत समायोजन सफल भएरै छोड्यो ।
तपाईको काममा सरकार स्वयम् सन्तुष्ट छैन र मन्त्रालय हेरफेर हुदैँछ भन्ने कुरा समेत आएको थियो नि ?
त्यो पत्रिका र आफ्नो मिडिया विकाउनका लागि गरिएको भ्रामक गसिप मात्र हो । रेड जोन, वाइट जोन भनेर आफ्नो पत्रिका बिकाउने धन्दामा लागेको हुन् । जसको स्तर पनि देखिएको छ । म आफु मन्त्री बन्ने वित्तिकै एउटा समुह यसलाई कसरी फेल गराउने भन्ने तिर लागि सकेको थियो ।
समायोजन त सकियो अब तपाईको अर्को काम के हुन्छ ?
कुनैपनि काम गर्दाखेरी साइड इफेक्ट हुन्छ, तिनीहरुलाई पनि मिलाएर लाने । गलत तत्वको चलखेलको काम कमी गर्दै जाने कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमा भर्ना गर्ने कामहरु छन् ।
काम गर्ने संस्थाहरुमा ट्रेड युनियनहरु छन्, संगठन भन्दा बलियो देखिएको छ ? यस्को लागि के गनुृहुन्छ ?
ट्रेड युनियनको जन्मदाता म आफै हो । तर पछिल्लो समय ट्रेड युनियनमा विकृति सृजना भएको थियो ट्रेड युनियनमा संलग्न भएपछि काम गर्नुपर्दैन भन्ने खालको विकृति सृजना भएको हो अब त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढाईन्छ ।
नेपाल भष्ट्रारको सुचीमा झन् अगाडि देखिएको छ, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकारले कस्ता खालका नीतिहरु ल्याउनु पर्ला ?
अस्थिरता लामो समय सम्म रह्यो जसले गर्दा गलत तत्वहरुको चलखेल भएको थियो । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । जसले अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा ठूलाठूला घटनाहरु बहिर आएका छन् । अहिले नै भ्रष्टचार शून्यमा झार्छु भन्ने त सम्भव नहोला त विस्तारै कमी हुदैँ जान्छ ।